Imibuzo ngejezi le-Newcastle United | Scrolla Izindaba
I-Newcastle United ezogqoka imibala yase-Saudi Arabia ngesizini ezayo kuzoba ubufakazi obusobala ukuthi leli qembu lizolawulwa ngokusho kwe-Amnesty International.
Iqembu lamaNgisi lathengwa i-PIF ngesinqumo ebesiyindida uma kubhekwa umlando ongemuhle wamalungelo abantu.
Noma iqembu lisazogqoka ijezi labo elimnyama nokumhlophe njengejezi labo lasekhaya, kodwa ijezi labo lasekuhambeni lizoba nemibala emhlophe neluhlaza efana neyeqembu lebhola lezinyawo lesizwe lase-Saudi Arabia.
Imibuzo mayelana nokuthathwa kweqembu iqhamuke ezinhlanganweni eziningi ezilwela amalungelo abantu futhi ngaphezu kokuthi i-Premier League igcizelela ngokuthi i-Saudi Arabia ngeke ilawule i-Newcastle i-Amnesty International iphakamisa okuhlukile.
“Uma kuyiqiniso ukuthi i-Newcastle United ishintsha ijezi layo ukuze lifane nemibala yezwe lase-Saudi Arabia. Lokhu kwehlisa amandla omnotho wase-Saudi kanye nokuzimisela kombuso ukugeza irekhodi lawo lamalungelo abantu elinonya, eligcwele igazi,” kusho uFelix Jakens umphathi wemikhankaso ye-Amnesty International UK.
“Naphezu kwazo zonke iziqinisekiso zabo zokwehlukana phakathi kwabanikazi base-Saudi neqembu, lokhu kubukeka njengobufakazi obucacile bombuso osebenzisa i-Newcastle ukuveza isithombe esihle.”
I-Newcastle ayizange iphawule ngezixhumanisi ezingase zibe khona nejezi labo lasekuhambeni nemibala yase-Saudi Arabia.
Njengoba ukuthandana nobulili obubodwa kungekho emthethweni kanye nesigwebo sentambo esisasebenza e-Saudi Arabia ukukhathazeka ngokuthathwa kwe-Newcastle kusalokhu kubhebhetheka.
Abalandeli baleli qembu nokho bajabule kakhulu ngokuthathwa kweqembu njengoba selinabanikazi bebhola abacebe ukudlula bonke ebholeni lomhlaba kanjalo nokugwema ukuphuma kwi-Premier League.
I-Newcastle ibibukeka izokwehla kwiligi ngoZibandlela, kodwa iqhubeke kahle nefomu selokhu kwaqala imakethe yokudlulisa abadlali ngoMasingana njengoba isibeke iqembu endaweni yeshumi nanye.
Umthombo wesithombe: @TheGuardian